Filipstad waxeey lee dahay soo jiidashada degmadyooinka yar, waxeeyna soo bandhigeeysaa fursado weeyn. Halkaan waxaad ka heleeysaa guriyaal aad ka heleeysid qabkood, waxbarsho heerkasto ah iyo shirkadeeyn leh jawi horay uu socdo. Waxaa kuu dhow shaqo, iskuul, hoowlooyinka xilliga fiirqada iyo dabiicada. Waxaa sii dheer soo bandhigid dhaqameed iyo munasabadooyinka oo leh heer fiican.
Gudaha Filipstad guri maa ka raadineeysaa? Filipstadbostäder waxaad ka dhex heleeysaa kuwa banaan. Bogga internetka ee degmada waxaa ku sii jiro shirkdaha guriyaasha iyo dalaalada-guriyaasha kale.
Gudaha Degmada Filipstad waxaa ku matalan koox-luuqadeed badan oo kala duwan, waxaa ka mid ah af soomaali, af suuriyaan, afka hooland iyo kuwo kale.
Degmada baaxadeed waxaa ku dhexyaalo in ku filan oo goob isboorti iyo jimicsi, tusaale ahaan goobta hawo-qaadashada ee Kallhyttans oo ka mid ah meesha ugu casiyeeysan iswiidhan ee xagga goobooyinka leh barafka sanceeysan iyo jid-socod oo ku dhexyaalo bey'ad dabiicad qurxoon. Bogga degmada ka akhriso nuucyada hoowlaha-urureed dhamaantood.
Gudaha degmada Filipstad waxaa ku yaalo dukaamo cunto, suuq ganacsi, maqaayado leh cunto iswiidhish ama cunto kale oo ka socoto dhaqamo kala duwan, biibito, dukaamo dhar iyo dukaamo gacan-labaad. Sido kale halkaan waxaa ku taalo maktabad, xafiiska shaqada, farmashiye iyo dukaamo kala duwan.
Xanaanada caruurta iyo xananada maalmeedka ee reereed waxaa loo soo bandhigaa canugaada hadii aad shaqeeyso, waxbarato, shaqo raadineeyso, ku jirto fasaxa waalidka ama haddii uu canuga lee yahay baahi gaar ah.
Sideeda dugsiyaasha hoose ee degmada Filipstad, waxeey dhamaantood uu shaqeeyan sida ugu wanaagsan oo loogu gaaro natiijo fiican ayadoo la fiirinaayo awooda gaarka ah. Sido kale halkaan waxaa ku yaalo dugsi sare.
Halkaan waxaa ku taalo Xarun-waxbarasho oo lagu dhigan karo waxbarasho jaamacadeed oo kala duwan iyo waxbarasho-masafadeed. Sido kale waxaa halkaan laga helaa barashada iswiidhiska soo galooytiga, sfi, iyo waxbarashada dadka waa weeyn. Degmada Filipstad waxaa ku taalo labo jaamacad – Dugsiga Bergs iyo dugsiga Gammelkroppa skogs.
Filipstad waxaa ku taalo labo rug caafimaad iyo hal xarun-reered, oo waxa ku yaalo waxa ka mid ah rugta caafimaadka caruurta iyo qaabilaad dhalinyaro. Sido kale degmada waxaa ku dhexyaalo dhowr qeeybo lagu daryeelo ilkaha.
Markii loo baahdo turjumaan waa la adeegsadaa.
Basaska jaalaha ee Värmlandstrafik ayaa kuugu dhex wadaayo gudaha degmada iyo qeeybaha kale ee Värmland.
Degmada Filipstad waa shaqo dhiibaha ugu weeyn, ayadoo leh ku dhawaad 1 100 shaqaale oo joogta ah, shaqaalaha waxeey ka shaqeeyaan shaqooyin badan oo kala duwan. Halkaan waxaa ku yaalo warshado weeyn, sidii Barilla iyo OLW.
Personlig assistent timvikariat Personlig assistent
Erfarna sjuksköterskor till Filipstads kommun Sjuksköterska, äldreomsorg och -vård/geriatrik
Lärare grundskolan mellanstadiet Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Sjuksköterska Sjuksköterska, grundutbildad
Specialpedagog / speciallärare till elevhälsan i Filipstad Specialpedagog
Kurator till Elevhälsan Skolkurator
Vi söker dig sjuksköterska till Karlstad Sjuksköterska, grundutbildad
Sjuksköterska , ambulanssjukvården Filipstad Sjuksköterska, grundutbildad
Säljare till Filipstad Hemförsäljare
Lärare i matematik åk 7 - 9 , 100 % Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Turismsamordnare i Filipstad Turistinformatör
Lärare till vuxenutbildningen SFI Lärare i gymnasiet
Söker erfaren pizzabagare Pizzabagare
BVC - sjuksköterska , vårdcentralen Filipstad Distriktssköterska
CNC - operatörer till en tillverkande industri CNC-operatör/FMS-operatör
Lärare till särskild utbildning för vuxna Speciallärare
Bogga 1 ee ka mid ah 2
ca 10 600
Karlstad 60 km
Göteborg 300 km
Oslo 300 km